November 2011 - iftineducation.com
Mashruuca soo nooleeynta manhajkii soomaaliya.
aadan21 / November 30, 2011
Iftin education – waxey dardargalineysaa mashruuca soonooleynta iyo dib uqorista dugsiga hoose, dhexe iyo sare ee manhajkii soomaaliya ayadoo kala kaashaneysa safaarada soomaaliya ee indonesia iyo wasaaradda waxabarashada.
Alla Muxuu sidaan iigu galaa miyuu bini aadam aheen (Sheeko Jaceyl: oo Aad u Murugo BadanQeybtii 2aad)
aadan21 / November 29, 2011
Waxaa la ii qaaday hospitalka, waxaa lagu murmay qofkii bixin lahaa qarashaadka waayo isbitaalada Muqdisho qofka isaga oo aan bixin lacag waxba loo ma qabto si kasta uu i dhiig baxayo, waxaana lama huraan noqotay aniga oo dhiig baxaya in la waco ahelkeyga, waxaana goobta soo gaaray abtiyaasheyda, waxaana la igu sameeyay qaliin dhanka caloosha ah. Waan u sheegay abtiyaasheyda…
Alla Muxuu sidaan iigu galaa miyuu bini aadam aheen (Sheeko Jaceyl: oo Aad u Murugo BadanQeybtii 1aad)
Hordhac: Sheekada waxaa qoray Daalac Daahir Shoot, waa sheeko jaceyl, waa qiso dhab ah, waana Sheeko uu idiin soo baahin Doono Shabakada Allbanaadir.com waxaadna sheekadan ka bogon doontaan maalmaha isniinta iyo Jimcaha hadii Allah inoo saamaxo. sheekada waxay ku bilaabaneesaa sidatan: Habeen ayaan waxaan raacay saaxbiibadeyda Ali Jaamac iyo Abdifatah Aways, waxaan u shukaansi doonanay xaafada Baar Ubax ee degmada…
Xasan Xuseen Maxamed (shab-shaab) waa Oday 50 jir ah oo weligiis aan guursan, haatanna sheegay inuusan rajo ka qabin inuu guursado. Haddaba Xasan Shab-shaab wuxuu faalo dheer oo ku saabsan sababta uu u guursan waayay una diiday inuu inta cimrigiisa ka dhiman uu guursado siiyey wargeyska Aayaha Nolosha ee ka faalooda arrimaha Qoyska iyo is-Jacaylka ee ka soo baxa magaalada…
Sheeko Jacayl ah Nabar aan Dawoobeyn qeybtii 4aad
Qaybtii 4aad Taleefanka gurigiisu waa uu iska dhacayaa sidii tiiyoo cidla’ looga guurey. Dhambaalladii tirada badnaa ee ay u dirtay wax jawaab ah kama hayso. Maxaa wiilkii qabsaday, ma ku nacay, ma la isku kiin diray, ballantii miyuu kaaga baxay, ma nool yahay, ma dhintay, ma xanuunsaday, mise si kalaa wax u jiraan bay iskula hadashay. Idman seddexdii maalmood ee…
Sheeko Jacayl ah Nabar aan Dawoobeyn qaybtii 3aad
Qaybtii 3aad Subax subaxyada ka mid ah bay Idman iyo hooyadeed isku keliyeysteen daaradda guriga. Nuuro waxay subaxaas go’aansatay in ay gabadheeda hoos ahaan u weydiiso sababta ay habeen kasta taleefanka ugu dhafarto iyo dadka ay la sheekeysato. “Hooyo, waa maxay dhaqankan xun ee aad lasoo baxday? Waa maxay taleefankan aad habeen kasta ku dhafreyso?” bay Nuuro gabadheeda weydiisay. Idman…
Sheeko Jacayl ah Nabar aan Dawoobeyn qeybtii 2aad
Qaybtii 2aad Cabdulqaadir M. Wacays “Naa heedhe, sheekadaas waa la innooga daran yahaye, maxaa cusub, adiga iyo Shirwac xaggee wax idiin marayaan?” bay Hodon lasoo boodday markey iyada iyo saaxiibteed Idman cabbaar ku fogaadeen sheekooyin kale oo ku saabsanaa gabdho iyo wiilal ay asaxaab ahaayeen. Hodon iyo Idman waxay ahaayeen saaxiibbo isku dhaarta. Waxay ahaayeen sheeko-wadaag hoose oo xanta isku…
Naba“……Haba baran lahaayaa, Ha u bixin lahaayaa, Iminkoon besteey ahay, Baroor miyaa wax ii qaban….. ”… (luuqdii: Khadiijo Foodeey Nuur) Qaybtii 1aad Cabdulqaadir M. Wacays Waxay ahayd goor maqrib ah oo ay isu diyaarineysey in ay aaddo golaha Internetka oo ay beryahaas si weyn ugu waalnayd. Waxay khadka MSN-ka kula ballansanayd wiil ay wada socdeen oo degganaa magaalada Minneapolis ee…
Bilan jaamac waa cuud iyo cadar la miiray,man baxay iyo ubax deyr jooga, diir iyo dabci midna ebbe kama soocin ehelka deegaanka,muqaal xardhan qurux iyo bilicba ebbaa ku shubay,dhererkeedu waa joog dhexdeedu waa mudac dhabankeedu waa daray dheeheedu waa dhiin waa gayaan guur gaadhay damac iyo dareen ayaa qaaday, Bilan waxaa ay dagantahay xaafada hodan ee moqdisho waxaa ay dhawaan…